माथिल्लो तामाकोसी सेयर वितरणमा ढिलाइ - Awajonline Online Newspaper
माथिल्लो तामाकोसी सेयर वितरणमा ढिलाइ
आवाज संवाददाता २७ श्रावण २०७४, शुक्रबार
दोलखाः माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने मिति नजिकिँदै गए पनि सेयर वितरणमा भने ढिलाइ हुँदै गएको छ । आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने योजना आयोजना व्यवस्थापनको तयारी भए तापनि अहिले ढिलाइ हुँदै गएको छ ।
आयोजना व्यवस्थापन पक्षले गत आवभित्रै आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीको तर्फबाट सेयर संकलन गर्ने योजना बनाएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि आउने जनप्रतिनिधिको पर्खाइलगायतका कारणले पछिल्लो समय सेयर वितरणमा ढिलाइ भएको हो ।
नयाँ स्थानीय तहअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको गठनमा ढिलाइ हुँदा पनि आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले दोलखावासीलाई सेयर जारी गर्न नसकेको हो ।
आयोजनामा दोलखावासीले जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर पाउने गरी कम्पनीको सेयर संरचना बनेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले सेयर वितरण प्रक्रिया पारित गरेपछि मात्रै कम्पनीले दोलखालीले पाउने १० प्रतिशत वितरण गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय बासिन्दाले पाउने सेयर वितरणमा ढिलाइ भएसँगै अन्य सर्वसाधारणले पाउने १५ प्रतिशत वितरणसमेत पछि धकेलिएको छ ।
आयोजनाको गत असार मसान्तसम्म ९०.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । यो अवधिमा ३४ अर्ब ६४ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
सेयर समयमा नउठ्ने हो भने आयोजनालाई पैसाको अभाव हुन थालेको उनले बताए । आयोजनाको ३५ अर्ब २९ करोड पूर्व अनुमानित लागत भए तापनि डलरको मूल्य वृद्धि, बजारमूल्य वृद्धि, भूकम्प, नाकाबन्दीले समयावधि बढ्ने कारणले ४१ अर्ब ७२ करोड पुग्न सक्ने आयोजनाको पछिल्लो प्रक्षेपण छ ।
आयोजनाले पछिल्लो पटक अघिल्लो चैतदेखि सेयर वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो । स्थानीयस्तरमा थप मोडालिटी बनाउनु पर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आवाज उठाएपछि एक कार्यदल बन्यो, त्यसले समेत गत फागुनमै आफ्नो प्रतिवेदन स्थानीय संयन्त्रलाई बुझाइसकेको छ । चुनावपछि जनप्रतिधि आउने भन्दै स्थानीय संयन्त्रले जनप्रतिनिधि पर्खेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन अर्को साताका लागि तोकेको छ । कुनै असामान्य घटना भएन भने आउँदो साता जिसस दोलखाले संयोजकसहितका जनप्रतिनिधि पाउँछ । जिससमा जनप्रतिनिधि आउँने बित्तिकै पहिलो कामको रूपमा तामाकोसीको सेयर वितरणकै लागि ताकेता गरिने आयोजनाका प्रवक्ता डा. न्यौपानेले बताए । जिसस र अन्य स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग समेत छलफल गरेर जतिसक्दो चाँडो स्थानीयका लागि सेयर जारी गरिने उनले जानकारी दिए ।
अपर तामाकोसीको सेयर जारी गर्नका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा नागरिक लगानी कोष र सह प्रबन्धकको रूपमा एनसीएम मर्चेन्ट बैकिङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ ।
धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकले कर्मचारी र अन्य वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चयकर्तालाई सेयर निष्कासनपछि २०७१ साल चैत ८ गतेदेखि स्थानीयको सेयर निष्कासनको लागि सूचनासमेत जारी गरेर स्थगित भएको थियो । आयोजनामा कार्यरत मजदुरलगायतले आफूले पनि सेयर पाउनु पर्ने माग राख्दै आयोजनाको काम रोकेपछि १६ दिनसम्म आयोजनाको काम रोकिएको थियो ।
कसले कति पाउँछन् सेयर ?
जिल्लावासीले १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर खरिद गर्न पाउने छन् । जिल्लावासीलाई १० प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ । जिल्लावासीले न्यूनतम ५० कित्ता र अधिकतम ७० कित्ता सेयर खरिद गर्न पाउने छन् । तर आयोजना रहेको लामाबगर र गौरीशंकर गाविसवासी आयोजनास्थलकै भएकाले अरुले भन्दा केही बढी पाउने छन् ।
धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री नियमावली २०७३ अनुसार आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत सेयर बिक्रीपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन तथा बिक्री गर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार दोलखावासीपछि आम सर्वसाधारणका लागि सेयर बिक्री खुल्ला हुनेछ । सर्वसाधारणले १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५८ लाख ८५ हजार किक्ता पाउँछन् ।
धितोपत्र नियमावली २०७३ अनुसार यही साउन १ गतेदेखि साधारण सेयर भर्नका लागि बैंक खाता र डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको हुँदा तामाकोसी सेयरमा दोलखावासीलाई झन्झटिलो हुने भएको छ ।
कोरोनाले मृत्यु भएकी चरिकोटकी युवतीको परिवारलाई संक्रमण देखिएन आवाज संवाददाता २० बैशाख २०७८, सोमबार
काेराेना संक्रमणले चरिकाेटकी २९ बर्षिय युवतीकाे मृत्यु आवाज संवाददाता १९ बैशाख २०७८, आईतवार
मन्त्रीको स्वीच थिच्ने रहरले तामाकोसीको परीक्षण ४ दिन ढिला, कांग्रेसले गर्यो विरोध आवाज संवाददाता १६ बैशाख २०७८, बिहीबार
कांग्रेस दाेलखाकाे क्रियाशील सदस्य संख्या १२ हजार पुग्याे आवाज संवाददाता १५ बैशाख २०७८, बुधबार
दोलखामा ७ जना संक्रमित, आफ्नै निर्णय लत्याउँदै मन्त्री आवाज संवाददाता १४ बैशाख २०७८, मंगलवार
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ड्याममा आजबाट पानी भर्न शुरु आवाज संवाददाता ११ बैशाख २०७८, शनिबार
काँग्रेस दोलखाका पूर्वसभापति न्यौपानेको शुक्रबार गरियो दाहसंस्कार आवाज संवाददाता १० बैशाख २०७८, शुक्रबार